September 22, 2013 – democracy for burma
Admin Power & Utility Co Ltd proposes to build 60 mw gas power plant in Dawei
On September 22, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Officials and an engineer team from the company visited Dawei yesterday morning to study the area where the power plant will be built and meet with the chief minister of Tanintharyi Region.
“Admin Power & Utility Co Ltd has signedaMOU with the Ministry of Electric Power to conduct preliminary survey to build the natural gas power plant project in Kanpauk area. We are now in the last stage of the preliminary survey. [The project] can generate 500 megawatt power. It will takealong to buildapower line and power plant [for the 500 megawatt power plant project],” said an official from Admin Power & Utility Co Ltd.
“As we will start receiving natural gas around March 2014, we will try to build this 60 megawatt power plant quickly in order not to waste the gas. At the same time, we will build the 230 KVA power line from Kanpauk to Dawei. It will take eight months to construct the 60 megawatt power plant and the 230 KVA power line. We’ve already bought the 60 megawatt machine,” said the official. Continue reading “Admin Power & Utility Co Ltd proposes to build 60 mw gas power plant in Dawei” →
Capt Niphan said the incident comes despiteawarming in ties between Bangkok and Nay Pyi Taw – especially in light of the recent visit of Myanmar’s Supreme Commander Snr Gen Min Aung Hlaing early last week. He he met Prime Minister and Defence Minister Yingluck Shinawatra and Thai military top brass.
“The situation is far from tense,” he said, adding such misunderstandings can sometimes occur on the overlapping border.
The boat is now under Myanmar officers’ control and is docked at Kawthaung at the southern tip of Myanmar, according toamedia report.
The boat belongs to Surin Losong, who is also the chairman of Ranong Fishermen’s Association. Mr Surin said he was contacted by Mr Kayu about 1.30am.
“That’s what I didn’t understand,” Mr Surin said, asking why the Thai navy did not respond to an attack allegedly carried out in Thai territory.
The Marine Police Division and state agencies should warn the fishermen about the territorial conflict between Thailand and Myanmar, Pol Lt Col Nirat Chuaichit, the province’s marine police inspector said.
MYANMAR BURMA : “ရန်ကုန်” – အခမ်းနားဆုံးသမိုင်းကြောင်းနဲ့ ရာဇဝင်ထဲမှာ စွန့်ပစ်ခြင်း
ထုံးနည်းနည်းနဲ့ ကတ္တရာအပြည့် သုတ်ခံလိုက်ရတယ်။
ဗလအားကိုးနဲ့ ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေရဲ့ ကြီးစိုးမှုမှာ
(ငါတို့ တိုင်းရင်းသူတွေရဲ့) အသွေးအသားတွေ ဈေးကစားခံနေရတယ်။
(သူတို့ပြောတဲ့) “ဈေးကွက်စီးပွားရေး” ဆိုတာကြီးမှာ
အရိပ်မည်းကြီးတွေ တစ်မြို့လုံးကို သိမ်းပိုက်ထားတယ်။
(ဆိုင်ကြီး၊ ဆိုင်သေး၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်၊ လမ်းမပေါ်)
နှစ်စဉ်… နှစ်စဉ် “ဆို၊ က၊ ရေး၊ တီး” ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကြားမှာပဲ
“ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရ” ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတင်
(မြန်မာကျပ်ငွေ) တစ်ထောင်ပေးရင် ပါးကျိုးအောင် ရိုက်လို့ရတယ်။
“Above The Law” ကို တီကောင်ဆားပက် ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း
(အစိမ်းရင့်ရောင်) အရေခြုံ/အရေချွတ်တွေလာရင် အသွင်တစ်မျိုး ကပြအသုံးတော်ခံရတယ်။
ဒီမိုကရေစီ၊ ဘာပါတီ၊ ညာပါတီ၊ ချာပါတီအော်နေရင်းနဲ့ပဲ
နလပ်ိန်းတုံးတွေကို ခုတုံးလုပ်လို့၊ မက္ကာမြို့နဲ့တူအောင် ဖိအားပေးခံနေရတယ်။
“စင်္ကာပူနဲ့တူအောင်လုပ်မယ်” ဆိုတဲ့ ကယောင်ကတမ်းတွေကြားမှာ
(ချိုင့်ခွက်အပြည့်နဲ့) အမှောင်လမ်းတွေက ပြက်ရယ်ပြုနေတယ်။
အကောင်းဆုံးအယူဝါဒနဲ့ လေးဆူဓါတ်ပုံကိုမှ အားမနာ
(ငတက်ပြားနဲ့) ဗာလနံတွေ လုပ်တိုင်းတင့်တယ်ပြီး၊ သမာအာဇီဝသမားတွေ ဝမ်းခါးနေတယ်။
“မြေမျို၍လူမျိုးမပျောက်၊ လူမျိုမှလူမျိုးပျောက်မည်” ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအောက်မှာ
ရေလောင်းရင် (ငါတို့ လွယ်လွယ်မရခဲ့တဲ့) အနီရောင်ကဒ်တွေ လွယ်ကူတယ်။
သူများတကာလို “အော်ပရာစီ” မဝင်ရဲတဲ့ မြို့မှာ
ဗိုင်းရပ်စ်အမည်းရောင်တွေ တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိ ဝင်ထွက်နေတယ်။
စင်မြင့်ထက်မှာ ချီးဘရိန်းတို့ သောက်တလွဲလုပ်လိုက်တိုင်း
(မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့) သွေးမတော် သားမစပ်သူတွေ မျက်နှာပွင့်သလောက်
ငါတို့ (တိုင်းရင်းသား) ညီအကို၊ မောင်နှမတွေ မျက်နှာငယ်ရတယ်။
ဘင်္ဂါလီ အဖေ့မြေ၊ ဘင်္ဂါလီ အမေ့မြေ (Fatherland, Motherland) ဖြစ်အောင်
တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်က ကြိုးစားပေးလိုက်တယ်။
မြို့တော်ဝန်နဲ့ စည်ပင်သာယာ နွှာလိုက်မှ
တစ်မြို့လုံးလည်း ပီပီပြင်ပြင် ပြာကျသွားရတယ်။
သူမဟာ မနုဿခြောက်သန်းကို ထမ်းပိုးရင်းနဲ့ မလှပနိုင်တော့ဘူး။
(၇၈၆)ကင်ဆာဆဲလ်က သုံးပုံတစ်ပုံ ကျွမ်းလောင်နေတယ်။
နှစ်(၂၀)ကျော်ကြာ စိတ်ကြိုက်ဆော့ကစားခံရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုမှာ
ရန်ကုန်သားတွေ ဘုံပျောက်သွားတယ်။ ။
Myanmar Burma army official admits interrogation of Rev. Ram Mai
Maj-Gen Tun Tun Naung, commander of Burma Army Northern Regional Military Command, conceded yesterday that government soldiers interrogated Rev. Ram Mai in early September, according to Kachin Baptist Convention (KBC). Rev. Ram Mai,apastor in Kachin’s Putao district, was allegedly detained along with several other villagers and tortured during questioning.
On September 22, 2013 September 22, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment